Tetika 4 hanadiovana fitaovam-panadiovana | Bezzia
Toñy Torres | 22/07/2021 10:00 | an-trano
Mba hanadiovana ny trano dia ampiasaina ny fitaovana enti-manadio isan-karazany, pad scouring, lamba, lamba ary kifafa izay tena manampy tokoa. Saingy ireo fitaovana rehetra ireo dia manangona bakteria ary mandany izany raha tsy diovina izy ireo dia aparitaka amin'ny haben'ny trano. Izay tsy isalasalana fa tsy olana amin'ny fahadiovana ihany, fa mety hanjary olana ara-pahasalamana.
Izany no ilain'ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo ny fanadiovany azy tsy tapaka. Aorian'izay vao azonao antoka fa manadio tsara ny tranonao ianao. Satria tsy misy ilana azy ny fiezahana mba hadio sy hilamina ary ho simika ny efitrano tsirairay, raha mampiasa fitaovana feno loto ianao. Raha te hahafantatra ny fomba fanadiovana mora foana ny fitaovana fanadiovana ao an-tranonao ianao, mariho ireto torohevitra manaraka ireto.
1 Fomba fanadiovana ny fitaovana fanadiovana
1.1 Fomba fanadiovana ny kifafafafafa
1.2 Manadio ny mop
1.3 Sponjy sy scourers
1.4 Ahoana ny fomba fanadiovana lamba sy lamba rovitra
2 Manadio kojakoja fanadiovana, anisan'ny fanazarana ny fahadiovana
Fomba fanadiovana ny fitaovana fanadiovana
Raha mpankafy Friends ianao, ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra malaza izay mbola manintona mpanaraka vaovao isan'andro 20 taona aorian'ny premiereany, dia ho tsaroanao ny fanatsarana ny maniac par, Monica. Amin'ny iray amin'ireo fizarana farany, io toetra amam-panahy io dia manadio miaraka amin'ny mpanadio azy ary mampiasa kely kokoa hanadiovana ilay lehibe. Ny saziny farany dia, mirary fa misy kely kokoa hanadio an'io.
Na dia fehezan-teny mampihomehy indrindra tamin'ny maro aza tamin'io fotoana io, ny tena izy dia tsy manadio tafahoatra fa ilaina ny manadio ny fitaovana tsirairay. Rehefa mampiasa ny fanadiovanao dia tsy maintsy alofanao ny tanky, ankoatry ny fampitana lamba mando amin'ireo faritra ao aminy.
Azonao an-tsaina ve ny fitazonana fitaovana fanadiovana vovoka, feno vovoka, ao anaty lalimoara? Tsy lojika, marina. Eny, toy izany koa no mitranga amin'ny zavatra hafa rehetra. Miaraka amin'ireo mpitovo ireo fika fanadiovana, azonao atao ny manadio ny entanao manadio haingana, fa tsy mila manolo azy ireo matetika loatra.
Fomba fanadiovana ny kifafafafafa
Makà borosy matevina misy volom-borona na borosy efa tonta, hanampy anao hanala ny loto mivangongo eo anelanelan'ny volon'ilay borosy mamafa izany. Rehefa afaka manomàna rano mafana iray lovia sy loatra detergent. Atsofohy ny kifafa ary avela hilona mandritra ny 20 minitra. Mba hamaranana dia kobanina amin'ny rano ary avelao ho maina amin'ny rivotra misokatra izy ary atreho midina, mba tsy ho simba ny volom-bolo.
Manadio ny mop
Farafahakeliny indray mandeha isaky ny telo herinandro dia tokony atao fanadiovana mop. Mila manao fotsiny ianao fenoy rano mafana sy paosy fanalana diloilo ny siny, toy ny mpanasa vilia. Avelao hilona antsasak'adiny izy io ary alatsaho tsara ny mop. Avereno anaty rano madio izy, ary atsobohy imbetsaka ny mop mba hanala ny loto sy savony.
Sponjy sy scourers
Ny scouring pads dia manangona potipoti-kanina mety hitarika bakteria atahorana ho salama. Diovy tsara izy ireo aorian'ny fikosehana, apetaho rendrika amin'ny rano mafana, soda, ary vinaingitra manadio fotsy. Madio izy ireo ary hizaka otrikaretina.
Ahoana ny fomba fanadiovana lamba sy lamba rovitra
Manomàna lovia misy rano mafana, kapoaky ny soda, la vinaigitra fanadiovana fotsy ary ranom-boasarimakirana iray. Avelao hilona mandritra ny 30 minitra, aorian'io fotoana io, kosehina tsara ny lamba tsirairay, kobanina amin'ny rano madio ary avelao ho maina ny rivotra. Azonao atao ihany koa ny mametraka azy ireo ao amin'ny milina fanasan-damba, na dia tsy ampirisihina aza ianao hampifangaro ireo lamba fanadiovana amin'ny akanjo, dia ho angovo sy fandaniana ara-toekarena tsy ilaina izany.
Manadio kojakoja fanadiovana, anisan'ny fanazarana ny fahadiovana
Raha zatra manadio ny fitaovana fanadiovanao isaky ny ampiasaina dia azonao atao ny mitazona azy ireo hadio amin'ny fomba mora kokoa. Ny famelana ny loto hanangona azy fotsiny dia mizara izany manerana ny trano. Fa koa hanasarotana ny asa fanadiovana sy famonoana otrikaretina aorian'izay. Ataovy madio sy simba foana ny trano manampy anao hahatsapa ho mahazo aina sy mahazo aina kokoa ao an-tranonao.
Manampia minitra vitsivitsy amin'ny fanadiovanao mba hanadiovana ny fitaovana izay nampiasanao. Ho madio kokoa ny tranonao, hisorohana mikraoba sy bakteria mampidi-doza hafa. Ary amin'izany dia ho afaka hanana trano milamina sy mety ianao hialana sasatra sy hilamina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Tetika 4 hanadiovana fitaovam-panadiovana